”Abid horay uma dhicin hub 40,000 oo KM ku jaray wax ka yar 100 daqiiqo!” – Maraykanka oo ka walaacsan hub uu Shiinuhu tijaabiyey | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Abid horay uma dhicin hub 40,000 oo KM ku jaray wax ka...
”Abid horay uma dhicin hub 40,000 oo KM ku jaray wax ka yar 100 daqiiqo!” – Maraykanka oo ka walaacsan hub uu Shiinuhu tijaabiyey
(Washington, DC) 06 Abriil 2022 – Shiinaha ayaa qarka u saaran inuu horumar ka sameeyo awoodiisa hubka Nukliyeerka taasoo noqon doonta isbedel wayn oo ku yimaada dheelitirka amniga caalamiga ah, sida uu qabo Admiral Charles Richard, oo ah Madaxa Taliska Istiraatijiga ah ee Maraykanka, oo diyaariyey qoraal loo gudbiyey Koongarayska Capitol Hill, sida ay faafisay Bloomberg.
Sarkaalkan ayaa lagu wadaa in uu la kulmo Guddi-hoosaadka Qoondaynta Difaaca Aqalka Koongarayska, kaasoo dhegaysi ay albaabadu u xiran yihiin la yeeshay maalintii Talaadada ah.
“Balaarinta aan caadiga ahayn ee Shiinaha” ee hubk aistaraatiijiyadeed ee nukliyeerku waxa ay la macno tahay khatar deg dega ah oo la gudboon Washington, Richard ayaa sidaa aaminsan.
Admiraalku waxa uu si gaar ah warkiisu ula jeedaa gantaalaha baalistiga ah ee isaga gudba qaaradaha oo qaadi kara madxaha nukliyeerka ee ay Beijing tijaabada ku sameeysay bishii Luulyo 2021-kii. Wuxuu ahaa gantaal guuxiisa ka dheereeya oo ku duulay ilaa 40,000 kiiloomitir in ka yar 100 daqiiqo, sida ku cad qoraalkiisa.
Waxay ahayd “masaafadii ugu dheerayd iyo waqtiga duulimaad ugu dheeraa ee uu hub dhulka laga ganay uu abid sameeyo, mana jiro dal kale oo taa horay ugu guulaystey ilaa maanta,” ayuu qoraalkiisa ku sheegay admiraalku, sida uu dhigayo Bloomberg.
Horumarkan tiknolojiyadeed ee Shiinaha ayuu ku tilmaamay inay la macno tahay “saamayn halis ah oo soo wajahdey xasiloonidii istiraatiijiyadeed” ee horay u jirtey, isaga oo intaa ku daray in awoodda iyo istaraatiijiyadaha millateriga Maraykanka ay ku tiirsan yihiin “malo ah in kahortaagga istiraatiijiga ah, iyo gaar ahaan kahortagga nukliyeerku, ay sidoodii sii ahaan doonaan.”
Sidaa darteed, Taliska Istaraatiijiyada Maraykanku wuxuu rumeysan yahay in Maraykanka laga yaabo inuu la tacaalo laba cadow oo suurtagal ah oo haysta hub nukliyeer ah oo ballaaran aadna loo casriyeeyay: Shiinaha iyo Ruushka.
Labadan quruumood waxay hadda awood u leeyihiin inay “kaligood bilaabaan hardan colaadeed oo cunfi wadata, meel kasta, qalab kasta oo dal haysto, iyo waqti kasta, adduunka oo dhan.” ayuu ka digey Admiraal Charles Richard oo ka hor hadlayey Koongarayska.
Previous articleShiinaha oo ka mahmaahay qorshe ay Galbeedku damacsan yihiin oo saamaynaya gobolka Aasiyada Baasifigga
Next article”Iibsada hubkeenna!” – Maraykanka oo Hindiya si cad ugu sheegay inay dhimaan hubka ay Ruushka ka iibsadaan